China LEDD730740 မျက်နှာကြက်နှစ်ဘက်တပ်ဆင်ထားသောဆေးဘက်ဆိုင်ရာခွဲစိတ်မှုအလင်းသည်မြင့်မားသောလျှပ်စီးလက်ခြင်းပြင်းထန်သောထုတ်လုပ်သူများနှင့်ထုတ်လုပ်သူများ။ | Wanyu
LEDD730740 မျက်နှာကျက်ကို Dual Head ဆေးဘက်ဆိုင်ရာခွဲစိတ်မှုအလင်းနှင့်မြင့်မားသောလျှပ်စီးပြင်းထန်မှု
သန့်ရှင်းရေးသေတ္တာပါသောအခန်းခန်းအတွက်လေပင့်အမျိုးအစားသည်လေကြောင်းစီးဆင်းမှုကိုပိတ်ဆို့ခြင်းကိုရှောင်ရှားပြီး laminar air စီးဆင်းမှုအတွင်းလှိုင်းလေထန်သည့်နေရာများကိုသိသိသာသာလျော့နည်းစေသည်။ LEDD730740 ဆေးဘက်ဆိုင်ရာခွဲစိတ်မှုနှစ်ဆရှိသောအလင်းသည် ၁၅၀,၀၀၀lux နှင့် max ၏အရောင်အပူချိန် ၁၅၀၀၀၀ နှင့် max CRI-95 တို့အားပေးစွမ်းသည်။ parameters များကိုအားလုံးသည် LCD touch screen control panel တွင်အဆင့်ဆယ်ဆင့်ဖြင့်ညှိနိုင်သည်။ လက်ကိုင်ပစ္စည်းအသစ်များဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးအပူချိန်မြင့်မားခြင်းနှင့်ဖိအားမြင့်ခြင်းများကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ နွေ ဦး ပေါက်ဈေးသုံးပေါပေါ၊ ဈေးသက်သာပြီးအဆင့်မြင့်ဇိမ်ခံပစ္စည်းကိုပေးပါ။
ပုဂ္ဂလိကနှင့်အများပိုင်ဆေးရုံများ၊ ဓာတ်ခွဲခန်းများ၊ ဆေးခန်းများစသည်တို့ဖြစ်သည်။
1. Laminar Flow သန့်စင်ခြင်းနှင့်သဟဇာတ
အဆိုပါပွင့်ချပ်အမျိုးအစားဆေးဘက်ဆိုင်ရာခွဲစိတ်အလင်းလေစီးဆင်းမှုကိုတားဆီးခြင်းနှင့် laminar လေစီးဆင်းမှုအတွက်လှိုင်းလေထန်ဒေသများသိသိသာသာလျော့နည်းစေနိုင်သည်။
အဝါရောင်နှင့်အဖြူရောင်မီးသီးများ သုံး၍ ရောစပ်ထားသောအလင်းသည်အရောင်အပူချိန်နှင့်အရောင်ပြန်ဆိုခြင်းအညွှန်းကိုတိုးမြှင့်ပေးပြီးဆရာဝန်များကသွေးနှင့်တစ်ရှူးများကိုခွဲခြားသိမြင်စေသည်။
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာခွဲစိတ်ကုသမှုဆိုင်ရာအလင်းရောင်သည်ခွဲစိတ်ကုသမှုနယ်ပယ်၏အောက်ခြေတွင်အလင်းယိုယွင်းမှု ၉၀% နီးပါးရှိပြီးတည်ငြိမ်သောအလင်းရောင်ရရှိစေရန်မြင့်မားသောအလင်းရောင်လိုအပ်သည်။ ဤနှစ်ကြိမ်ခွဲစိတ်ထားသောအလင်းရောင်သည် ၁၅၀၀၀၀ အထိအလင်းပေးနိုင်ပြီး ၁၄၀၀ မီလီမီတာအတိမ်အနက်ကိုပေးနိုင်သည်။
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာခွဲစိတ်မှုအလင်း၏အရောင်အပူချိန်၊ အလင်းရောင်ပြင်းထန်မှုနှင့်အရောင်ထုတ်ပေးသည့်အညွှန်းကို LCD ထိန်းချုပ်မှုပြားမှတဆင့်တစ်ပြိုင်တည်းပြောင်းလဲနိုင်သည်။
အနည်းဆုံးထိုးဖောက်ခွဲစိတ်ကုသမှုများအတွက်အထူး endoscope အလင်းကိုသုံးနိုင်သည်။
5. ယုံကြည်စိတ်ချရသော switching ပါဝါထောက်ပံ့ရေး
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကျော်ကြားသောကုန်အမှတ်တံဆိပ်ဖြင့် switching power supply သည် AC 110V-250V အတွင်းတွင်တည်ငြိမ်စွာအလုပ်လုပ်သည်။ မတည်ငြိမ်သောဗို့အားရှိသောForရိယာများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပြင်းထန်သောတားဆီးနှိမ်နင်းခြင်းစွမ်းရည်နှင့်အတူအခြားရွေးချယ်စရာများကိုလည်းပေးသည်။
အပူမှအလင်းအချိုး (mW / m²· lux)
LED ပမာဏ (pc)
LED ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်း (ဇ)
ရှေ့သို့ LEDD740 မျက်နှာကျက် Mount One LED OT Light ကိုအဝေးမှထိန်းချုပ်သော
နောက်တစ်ခု: LEDD620620 မျက်နှာကျက်ကို Dual Dome ဆေးဘက်ဆိုင်ရာလှည့်လည်မီးခုံနံရံထိန်းချုပ်ရေး
DL700 ဟလာဂင်မိုဘိုင်းအော်ပရေတာပြဇာတ်ရုံအလင်း ...
LEDD740 မျက်နှာကြက်ကို LED One Head OT အလင်းရောင် ...
LEDB620 အမှတ်အသားအမျိုးအစား Ma မှ LED ခွဲစိတ်အလင်းရောင် ...
LEDL730 LED AC / DC အရိပ်မရှိသောခွဲစိတ်မီး ...
LEDB740 Wall Mount LED မီးစက်ပြဇာတ်ရုံအလင်း ...
LEDL740 LED အရိပ်မရှိသောရွေ့လျားနိုင်သော OT အလင်း ... B